ỊHAZI ASUS RT-N12 D1 RAWỤTA MAKA BEELINE + VIDEO - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ruo ogologo oge, edere m otú e si hazie ASUS RT-N12 wireless router maka Beeline, ma ha bụ ndị dị iche iche na ngwaọrụ na ha nyere na iche iche firmware mbipute, ya mere usoro nhazi a dịtụ iche.
N'oge ahụ, nhazi nke Wi-Fi rawụta ASUS RT-N12 bụ D1, ngwa ngwa nke ọ na-aba n'ime ụlọ ahịa bụ 3.0.x. Anyị ga-atụle ịmepụta ngwaọrụ a kpọmkwem na ntụziaka a site na nkwụsị. Ntọala anaghị adabere na usoro sistemụ ị nwere - Windows 7, 8, Mac os X ma ọ bụ ihe ọzọ.
Video - Configuring ASUS RT-N12 Beeline
O nwekwara ike ịba uru:
Ịtọ ASUS RT-N12 na ochie mbipute
Iji malite, ana m atụ aro ka ị na-ele ihe nkuzi vidiyo ahụ, ma ọ bụrụ na ihe edoghị anya, n'okpuru usoro niile a kọwara n'ụzọ zuru ezu na nhazi ederede. Tinyere na e nwere ụfọdụ okwu banyere njehie na-ezighị ezi mgbe ị na-edozi onye ntanetị na ihe ndị Internet nwere ike ọ gaghị adị.
Jikọọ rawụta iji hazie
N'agbanyeghi na ijikọta onye rawụta ekwesighi nke siri ike, nani, enwere m ike ịkwụsị ebe a. Na azụ nke onye ntanetịja, e nwere ọdụ ụgbọ mmiri ise, otu n'ime ha bụ anụnụ anụnụ (WAN, Internet) na anọ ndị ọzọ bụ odo (LAN).
The ISeline USB kwesịrị ejikọrọ na WAN n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Enwere m ike ịmepụta onye na-enye ihe ntanetị na njikọ njikọ ya, ọ ga-azọpụta gị n'ọtụtụ nsogbu ndị nwere ike. Iji mee nke a, jikọọ otu ọdụ ụgbọ mmiri LAN na router na njikọ kọntaktị nke kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ na eriri ya.
Tupu ị hazie ASUS RT-N12
Ihe ụfọdụ ga-enye aka na nhazi ọganihu ma belata ọnụ ọgụgụ nke nsogbu ndị metụtara ya, karịsịa maka ndị ọrụ novice:
Ma n'oge nhazi ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị, adịghị amalite njikọ Beeline na kọmpụta (nke a na-ejikarị eme ihe n'ịntanetị), ma ọ bụghị ya, onye ntanetị agaghị enwe ike ịme njikọ dị mkpa. Ịntanetị ga-arụ ọrụ n'emeghị Beeline.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị hazie router site na njikọ njikọ. Na jikọọ site na Wi-Fi mgbe enwere ihe niile.
Naanị, gaa na ntọala njikọ ejiri kọntaktị na-ekwurịta okwu, ma hụ na ntọala protocol TCP / IPv4 dị na "Nweta adreesị IP na-akpaghị aka ma nweta adreesị DNS na akpaghị aka." Iji mee nke a, pịa igodo Win + R na keyboard (igodo Win na logo Windows) ma tinye iwu ahụ ncpa.cplwee pịa Tinye. Họrọ site na ndepụta nke njikọ onye ị na-ejikọta na router, dịka ọmụmaatụ "Mpaghara Njikọ Obodo", pịa aka nri na họrọ "Njirimara". Mgbe - lee foto dị n'okpuru ebe a.
Ụzọ esi tinye ntọala rawụta
Bunye onye ntinye ya n'ime nchịkwa ike, mgbe ị tụlechara ndụmọdụ niile dị n'elu. Mgbe nke a gasịrị, ihe abụọ nwere ike ime: ihe ọ bụla ga - eme, ma ọ bụ na ibe ahụ ga - emeghe dị ka oyiyi dị n'okpuru. (N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ị nọworị na ibe a, ọ ga-emeghe dịtụ iche, gaa n'ihu n'akụkụ nke ntụziaka). Ọ bụrụ, dị ka m, peeji a ga-adị na Bekee, ị gaghị agbanwe asụsụ a n'oge a.
Ọ bụrụ na ọ mepeghị na-akpaghị aka, malite ihe nchọgharị ọ bụla na ụdị dị na nchịkwa adres 192.168.1.1 ma pịa Tinye. Ọ bụrụ na ị hụ nbanye na paswọọdụ arịrịọ, tinye ha na admin na mpaghara abụọ (adreesị a kapịrị ọnụ, nbanye na paswọọdụ edere na mkpanaka n'okpuru ASUS RT-N12). Ọzọ, ọ bụrụ na ị nọ na peeji na-ezighi ezi nke m kwuru n'elu, gaa ozugbo na mpaghara ọzọ nke akwụkwọ ntuziaka.
Gbanwee paswọọdụ ASUS RT-N12 paswọọdụ nchịkwa
Pịa bọtịnụ "Gaa" na ibe ahụ (na nsụgharị Russia ka aha ahụ nwere ike ịdị iche). N'oge ọzọ, a ga-eme ka ị gbanwee ndabara nkwenye na ihe dị iche. Mee nke a ma echefula paswọọdụ. M ga-edetu na paswọọdụ a ga-adị mkpa iji tinye ntọala nke router, ma ọ bụghị maka Wi-Fi. Pịa Ọzọ.
Ngwaọrụ ga-amalite ịchọta ụdị netwọk, ma nyezie ịbanye aha netwọk SSID ma tinye paswọọdụ na Wi-Fi. Tinye ha ma pịa "Mee". Ọ bụrụ na ị na-edozi onye ntanetị na njikọ ikuku, n'oge a, njikọ ahụ ga-agbaji na ị ga-achọ ijikọ na netwọk ikuku na ntọala ọhụrụ.
Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-ahụ ozi gbasara mpaghara ndị a etinyere na bọtịnụ "Next". N'eziokwu, ASUS RT-N12 na-achọpụta ụdị netwọk na-ezighị ezi ma na ị ga-ahazi njikọ Beeline. Pịa Ọzọ.
Ntọala njikọ Beeline na Asus RT-N12
Mgbe ị pịrị "Ọzọ" ma ọ bụ mgbe ị nọnyechara (mgbe ị jesịrị mgbakọ nhazi) ụzọ nke adreesị 192.168.1.1 ị ga-ahụ peeji na-esonụ:
ASUS RT-N12 isi ntọala ntọala
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ bụrụ na, dị ka m, ọhụụ weebụ adịghị na Russian, ị nwere ike ịgbanwe asụsụ n'asụsụ aka nri n'elu.
Na menu na aka ekpe, họta "Internet". Mgbe nke ahụ gasịrị, debe ntọala Njikọ Ịntanetị ndị dị na Beeline:
Were adreesị IP na-akpaghị aka: Ee
Aha njirimara: nbanye Beeline, malite na 089
VPN nkesa: tp.internet.beeline.ru
Ntọala njikọ Beeline L2TP na ASUS RT-N12
Na pịa "Mee". Ọ bụrụ na etinyere ntọala niile n'ụzọ ziri ezi, na njikọ Beeline na kọmputa n'onwe ya agbaji, mgbe obere oge gasịrị, na-aga n'ime "Network Network", ị ga-ahụ na ọnọdụ Ịntanetị bụ "ejikọta".
Ntọala netwọk Wi-Fi
Ị nwere ike ime ntọala ntọala nke ntọala netwọk igwefoto nke router na ngbado nke nhazi akpaka nke ASUS RT-N12. Otú ọ dị, n'oge ọ bụla i nwere ike ịgbanwe paswọọdụ maka Wi-Fi, aha netwọk na ntọala ndị ọzọ. Iji mee nke a, nanị mepee "Network Network".
Atụ aro aro:
SSID - aha ọ bụla achọrọ maka netwọk ikuku (ma ọ bụghị Cyrillic)
Usoro Nyocha - WPA2-Personal
Paswọdu - ọbụlagodi 8 ederede
Channel - ị nwere ike ịgụ banyere nhọrọ nhọrọ na ebe a.
Ntọala Nche Wi-Fi
Mgbe itinye ngbanwe ahụ, zọpụta ha. Nke a niile, ugbu a ị nwere ike ịnweta Ịntanetị site na ngwaọrụ ọ bụla nwere nkwado Wi-Fi site na ijikọ na netwọk wireless gị.
Rịba ama: iji hazie TV telivishọn nke Beeline na ASUS RT-N12, gaa na "netwọk mpaghara", họrọ taabụ IPTV ma kọwaa ọdụ ụgbọ mmiri maka ijikọ igbe ahụ setịpụrụ.
Ọ pụkwara ịbịaru aka: nsogbu ndị nwere nsogbu mgbe ị na-edozi router Wi-Fi